စံပယ်ပန်း: July 2012
စံပယ်ပန်းလေးရဲ့ဖြူစင်မှူ၊ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှူကိုသဘောကျလို့ ဒီခေါင်းစဉ်လေးပေးလိုက်တာပါ..။ ပန်းကလေးနဲ့အရွက်ကလေးဟာ အဖြူနဲ့အစိမ်း ဆန့်ကျင်ဘက်အရောင်နှစ်မျိူးနဲ့သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှူကို ကိုယ်စားပြုနေသလို ခံစားရပါတယ်..။ ရိုးသားဖြူစင်မှူနဲ့ လောကကြီးကိုမွှေးရနံ့လေးပေးနေတဲ့ ရိုးသားနှိမ့်ချတဲ့ စံပယ်ပန်းလေးလို လောကကြီးကိုကောင်းကျိူးပြုနိုင်ပါစေလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆန္ဒပြုရင်း...။
မူလစာမျက်နှာ NTUနေ့စွဲများ စရိုက်များ OOP with C# အမျိူးသမီးကဏ္ဍ အချက်အပြုတ် ရောက်တတ်ရာရာ အလုပ် အမေ ဖတ်သင့်သောစာ
လူတွေရဲ့နေ့စဉ်ဘ၀ထဲမှာ ကင်မရာဟာ ဖုန်းပြီးရင် အရေးအပါဆုံးနေရာကို ရောက်လာပြီလို့ ဆိုလို့ရနိုင်လာပြီထင်ပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် ဒီအဆိုကလည်း စင်ကာပူလိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်ပဲ မှန်နိုင်ပါတယ်..။ မစံပယ်တို့မြန်မာနိုင်ငံလို စားဝတ်နေရေးကို အသေအကြေလုံးပန်းရဆဲနိုင်ငံတွေကတော့ ကင်မရာမပြောနဲ့ တကယ်လိုအပ်တဲ့ တယ်လီဖုန်းကို အနိုင်နိုင် သုံးစွဲနိုင်အောင် ကြိုးစားရပါတယ်..။
ဘလော့ကာအများစုက ဓာတ်ပုံလေးတွေရိုက်ပြပြီး ပုံလေးတွေတင်လိုက် စာလေးတွေရှင်းပြလိုက် လုပ်ကြတော့ ဘလော့ကာဟု အထင်ရောက်စ မစံပယ်လည်း ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြီး ဘလော့မှာတင်ချင်လာပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် ကင်မရာဝယ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကို မရောက်သေးဘူးလို့ မိမိကိုယ်ကိုယူဆပြီး ဖုန်းကင်မရာနဲ့ပဲရိုက်ပြီး နေခဲ့ပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ မစံပယ်မှာ ကင်မရာရှိမှဖြစ်မယ့်အခြေအနေတစ်ခု ဖန်လာတဲ့အတွက် ရှိစုမဲ့စုလေးနဲ့ ဈေးချနေပါတယ်ဆိုတဲ့ ပြပွဲကြီးဆီ အချိန်မီ အပြေးအလွှားလေးသွားလိုက်ရပါတယ်..။ အဲဒီထဲကမှ အမျိူးမျိူးသော ပြောင်းတို၊ ပြောင်းရှည်များနှင့် ပြသထားသော တန်ဖိုးကြီးကင်မရာများကို အနိုင်နိုင်ဖယ်ပြီးသကာလ မစံပယ်တတ်နိုင်မယ့် ဈေးအခြေအနေရှိတဲ့အထဲက မစံပယ်လိုချင်တဲ့ကင်မရာအမျိူးအစားကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်..။
အခုတော့ ဘလော့ကာကြီးမစံပယ်ဟာ ကင်မရာမီးတ၀င်းဝင်းနဲ့ တွေ့ကရာမြင်ကရာကိုဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ အသင့်အနေအထားမှာ ရှိနေပါတယ်..။ ကင်မရာဗဟုသုတ သုညအခြေအနေမှာရှိတဲ့မစံပယ်ရဲ့ ကင်မရာဝယ်နည်းနိဿရည်းကတော့ ဘယ်တံဆိပ်ဝယ်ရမလဲဆိုတာ ကင်မရာဝယ်ဘူးနေကျ အစ်ကိုတစ်ယောက်ကိုမေးလိုက်ပါတယ်..။ သူပြောတဲ့ တံဆိပ်ရှိရာ ဆိုင်ရှိရာကို တန်းသွားလိုက်ပါတယ်..။ အတူလိုက်ပေးတဲ့ မောင်ကလေးကလည်း မစံပယ်မေးသမျှဆိုင်က ကင်မရာတိုင်းကို ၀ယ်ခိုင်းပါတယ်...။ သူ့ရဲ့ကင်မရာဗဟုသုတကလည်း သုညဖြစ်တဲ့အထဲမှာ သူကမစံပယ်လို ကင်မရာကိုယ်တိုင်ဝယ်မယ့်ကာယကံရှင်မဟုတ်တော့ စိတ်ဆန္ဒထက်သန်မှုလည်း မရှိတော့ မစံပယ်ပဲရှေ့ကသွား...၊ ဟိုလျှောက်မေး ဒီလျှောက်မေးနဲ့..။ အလဲ့ မစံပယ်ပဲကွယ်..။ တွေ့တာနဲ့တစ်ခါတည်းတန်းဝယ်ရင် မစံပယ်ရာဇ၀င်ရိုင်းသွားမှာပေါ့..။ အဲဒီတော့ ဟိုလျှောက်မေး ဒီလျှောက်မေးနဲ့ ပထမဆုံးဝင်တဲ့ တံဆိပ်ကဆိုင်ကို ဒုတိယမြောက်ပြန်အသွားမှာ အရောင်းစာရေးမလေးရဲ့ ညွှတ်ကွင်းမှာမိပြီး မစံပယ်ဝယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်..။ ဒါတောင်မှ ပြပွဲကြီးတစ်ခုလုံးကို ဘာတွေရောင်းနေလဲ..၊ ဘာတွေ ဈေးဘောင်ချိူးနေလဲဆိုတာ တစ်ခေါက်တော့ အရင်ပတ်လိုက်ပါသေးတယ်..။ အစဉ်အလာမပျက်ရအောင် ပေါ့ရှင်..။ အဲဒါပြီးမှဝယ်ပြီး အဲဒီဆိုင်က၀ယ်လိုက်တာနဲ့ အဲဒီဆိုင်ထဲကို စိုက်တိုက်စိုက်တိုက်နဲ့ဝင်အသွားမှာ ပစ္စည်းရွေးဖို့က ဟိုးးးး နောက်ဖေးထဲကိုသွားပါဆိုတာနဲ့ နောက်ဖေးထဲသွားရပါတယ်..။ လိုချင်တာက အနက် ၊ ကျန်တဲ့ပစ္စည်းက ခဲရောင်မို့ ခဲရောင်ပဲယူခဲ့ရပါတယ်..။
ကင်မရာဝယ်လာပြီး တန်းရိုက်လို့ရမယ်ထင်တဲ့ မစံပယ်က အခန်းပြန်ရောက်ပြီး အသုံးပြုပုံစာအုပ်ဖတ်မှ သူကကွန်ပျူတာလိုပဲ ဆော့ဝဲအင်စတောလုပ်ရပါသေးလားဆိုတာ သိပါတော့တယ်..။ အဲဒီတော့မှ ဓာတ်ခဲထည့်..၊ မယ်မရီကဒ်ထည့် အားသွင်း..၊ အင်စတောလုပ်တာတွေ လုပ်ပါတော့တယ်..။
ပထမဆုံးကင်မရာစမ်းတဲ့ ရှူခင်းများကတော့ နှစ်ရက်မရှင်းဘဲထားတဲ့ မစံပယ်အခန်းပဲဖြစ်ပါတယ်..။ စားပွဲပေါ်က ရှူပ်ပွနေတဲ့ ရှူခင်းလှလှတွေကိုလည်း ရိုက်ပါတယ်..။ ဘုရားစင်ဘက်ကို လှည့်ရိုက်ပြီး ကြမ်းပြင်ကရွဲ့စောင်းနေတဲ့ ခြေသုတ်ခုံတွေပါ ရိုက်ပါတယ်..။ ဘာကျန်သေးလဲ ရိုက်စရာ..။ အပြင်သွားစရာရှိတော့လည်း အိတ်ထဲထည့်ယူသွားပါတယ်..။ အပြင်ကကြုံသမျှကိုလည်း ရိုက်ခဲ့ပါတယ်..။ ဒီတစ်ပတ်၊ ၁၀ ရက်ကတော့ မစံပယ်ရဲ့ မျောက်အုန်းသီးရနေ့တွေပါပဲ..။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 7/24/2012 01:44:00 am0comments
မိမိသာရ၍ သူတစ်ပါးမရစေချင်သော စိတ်..။ သူတစ်ပါးကောင်းစားနေသည်ကို ငါသာရလိုက်ပါတော့ဟု တပ်မက်သောစိတ်..။ သူတစ်ပါးရနေသည်ကို မနာလိုသောစိတ်..။ အရင်းစစ်လိုက်သောအခါ ပစ္စုပ္ပုန်ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုသာ ယှဉ်နိုင်မည်..။ အတိတ်ကုသိုလ်ကံကို မယှဉ်နိုင်ပါ..။
သူတစ်ပါးအောင်မြင်နေသာအခြေအနေတွင် မိမိအားစိုက်ထုတ်ပေးလိုက်ရမှု မပါဝင်ပါ..။ သူ့အကျိုးနှင့် သူ့အကြောင်းနှင့် အောင်မြင်နေသည်သာ ဖြစ်ပါသည်..။ ထို့အတွက် မနာလိုစိတ်ဖြစ်ပေါ်စရာ မလိုပါ..။
မနာလိုစိတ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်ချက်မရှိခြင်းမှ အရင်းခံသည်..။ မိမိအားထုတ်မှု ဇွဲလုံ့လနှင့် ဆန္ဒဇောကို ယုံကြည်စိတ်ချနေလျှင် ဘာကိုမှ မလိုစရာအကြောင်း မရှိတော့ပါချေ..။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 7/24/2012 01:10:00 am0comments
မကောင်းမှုဟူသည် ဘယ်အရာတွေနည်း..။ အကုသိုလ်သည် သတ်မှတ်ချက်မဟုတ်..။ သဘာဝတရားများသာဖြစ်၏..။ စိတ်ဆိုးစိတ်ယုတ်မွေးမိရုံနှင့် အချိန်မဆိုင်းဝဋ်လည်တတ်သော ကုသိုလ်မျိူးရှိတတ်သူဟု မိမိကိုယ်ကိုယ် သတ်မှတ်မိသည်..။ မတရားသောနည်းနှင့်ရသော ပိုက်ဆံသည် လွယ်လွယ်ကူကူနှင့်ပင် အချိတ်ဆက်မိမိပြန်ကာထွက်သွားလေသည်..။
မကောင်းမှုတစ်ခုကို သိသိကြီးနှင့်ကျူးလွန်လိုက်သည်..။ မည်သူမျှမသိပါ..။ မည်သူသိတာမသိတာသည် အရေးမကြီးပါ..။ မိမိကိုယ်ကို သိနေသည်က ပိုဆိုးပါသည်..။ဘယ်လိုခံစားနေရသလဲ..။ အတွေးများမကြည်လင်ပါ..။ နောက်ကျိကာနေသည်..။ မလုပ်ဘဲနေလျှင်လည်းဖြစ်နေသည်ကို လုပ်လိုက်ပြီး တနုံ့နုံ့ခံစားနေရသည်..။ ကျူးလွန်သောအဖြစ်ကလေးနှင့်မတန်အောင်ပင် စိတ်ဒုက္ခကြီးမားလှသည်..။အမျိူးမျိူးကြံဖန်ကာ စိတ်ဆင်းရဲရ တွေးပူရသည်..။
သံသရာတွင်လည်း မကောင်းမှု၏အကျိူးဆက်ကို ပယ်ပယ်နယ်နယ်ကြီးခံရနိုင်သေးသည်..။ ဘယ်အချက်မျှကောင်းသည့်အရာမရှိပါ..။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 7/24/2012 12:51:00 am0comments
မစံပယ်၏ nephiew နဲ့ niece...။
မစံပယ်အမှတ်မှားပုံဖြစ်၏..။ မစံပယ်ငယ်ငယ်ကတည်းက မီးနင်းအကျက်သန်လှသည်..။ မနက်ဖြန်စာမေးပွဲဖြေမည်ဆိုလျှင် ဒီနေ့တစ်နေကုန် သင်သမျှအကုန်ကျက်တတ်ရာ အင်္ဂလိပ်ဖြေမည်ဆိုလျှင်လည်း မီးနင်းကအစ တစ်အုပ်လုံးပြန်ကျက်နေတတ်သည်..။ မစံပယ်အစ်မက မီးနင်းဆိုတာ စာမေးပွဲမှာမမေး၍ မကျက်ရဟု အကြံပေးသည်..။ မစံပယ်လက်မခံပါ...။ စာမေးပွဲဖြေသွားမည်ဆိုလျှင် သင်ထားသမျှ အကုန်ကျက်သွားရမှ..။ ထို့ကြောင့်စာအများစုမှာ မစံပယ်ခေါင်းထဲတွင် ကျိူးကြောင်းဆီလျော်စွာချိတ်ဆက်မိမိရောက်လာသည်မဟုတ်ဘဲ ဓာတ်ပုံရိုက်သွင်းထားသကဲ့သို့ မျက်စိထဲတွင် အကွက်လိုက် အကွင်းလိုက်ပေါ်နေတတ်ရာ မစံပယ်၏ကျိူးကြောင်းဆင်ခြင်တုံတရားသည် ထိုကတည်းကနည်းခဲ့လေသလားပင်..။
မစံပယ်မီးနင်းကျက်ချိန်တုံးက nephew ဆိုသည့်စကားလုံးနှင့် niece ဆိုသောမီးနင်းနှစ်လုံးကို မှတ်မှတ်ရရ ၁၀ တန်းနှစ်တွင် သေချာသတိထားမိလာသည်..။ တူမတစ်ယောက်အနေနှင့် ဦးလေးဆီသို့ အမှတ်ရကြောင်းပေးစာအရေးကျင့်သည့်အချိန်တုံးကပေါ့..။
မစံပယ်စိတ်ထဲ ဘယ်လိုမှတ်သလဲဆိုတော့ "ဟင် .. တူဖြစ်တဲ့သူကျတော့ nephew ဆိုပြီး အရှည်ကြီးပေါင်းရတယ်..။ တကယ်ဆို တူဆိုတဲ့ယောကျာ်းလေးက စာလုံးတိုတိုပဲဖြစ်သင့်တယ်..။ ဒါမို့လို့ niece က တူဖြစ်သင့်တယ်..။ nephew ကတူမဖြစ်သင့်တယ်ဟု တွေးခဲ့သည်..။" ထိုတွေးခဲ့သည့်အရှိန်သည် အတော်အတန်ကြီးမားခဲ့ရာ မစံပယ်မှာ niece သည် တူ..၊ nephew သည် တူမဟု အမှတ်မှားသည်အထိ..၊ ရုတ်တရက်ပြောတော့မည်ဆိုလျှင် ဘယ်ဟာကဘာမှန်းဝေခွဲမရတတ်သည်ထိ အခက်အခဲတွေ့တွေ့သွားတတ်ပါသည်..။ သေချာအောင် အင်တာနက်မှာပြန်ရှာမှ nephew သည် တူ..၊ niece သည် တူမဖြစ်နေပါသည်..။ သေသေချာချာမှတ်ထားပြန်ရင်လည်း နောက်တကယ်ပြောမည်ဆိုသောအခါ nephew သည် တူမဖြစ်နေတတ်ပြန်ပါသည်..။ ကလေးအင်္ကျီဆိုင်မှာလည်း ကျားမကလေးဝတ်များကို မိန်းကလေးဝတ်များနေရာတွင် my nephew အတွက်ဟု သွားရှာတတ်ပါသည်..။ အရောင်းဈေးသည်မလေးက ဇဝေဇ၀ါပြန်မေးမှ မစံပယ်လည်း ကြောင်တောင်တောင် ဇဝေဇ၀ါဖြစ်ရပြန်ပါသည်..။
ထိုဇဝေဇ၀ါဖြစ်မှုကို စာအဖြစ်ချရေးဖို့ စိတ်ကူးမိသည်မှာကြာပေပြီ..။ အခုမှ အထမြောက်သည်..။ အခုလိုချရေးပြီးသည့်နောက်တော့ မစံပယ် ဇဝေဇ၀ါမဖြစ်တော့ဘူးရယ်လို့ပင်..။ ဒါပေမယ့် မသေချာသေးပါ..။ ဆက်ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေနိုင်သေးပါသည်..။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 7/15/2012 10:29:00 pm0comments
Labels: မစံပယ်နှင့် အလွဲများ
မျက်မှန်တပ်ကာစ မျက်မှန်နဲ့အသားမကျသားသေးတဲ့သူတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ့်မျက်လုံးရှေ့မှာ ၊ ကိုယ့်နှာခေါင်းပေါ်မှာ မျက်မှန်ကြီးပါနေတာကို အမြဲသတိထားမိနေတတ်တယ်..။ မျက်မှန်နဲ့အသားကျသွားတဲ့လူတစ်ယောက်ကျတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမျက်မှန်တပ်ထားလို့တပ်ထားမှန်းမသိအောင်ကို လူနဲ့မျက်မှန်နဲ့အသားကျသွားတယ်တဲ့..။ မစံပယ်လည်းမျက်မှန်သမားတစ်ယောက်ဆိုတော့ အဲဒီအဆိုဟာမှန်တယ်ဆိုတာ ထောက်ခံပါတယ်..။ တခါတလေအပြင်သွားမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို မျက်မှန်တပ်ထားသလား မတပ်ထားသလားဆိုတာကို ပြန်ပြန်စမ်းကြည့်ရပါတယ်..။ တပ်ထားရက်သားနဲ့လည်း မျက်မှန်မပါသေးဘူးထင်ရင် ထင်နေတတ်ပါတယ်..။ မပါဘဲနဲ့လည်း အပြင်ရောက်မှဝါးတားတားဖြစ်ပြီဆိုမှ အပြေးအလွှားပြန်ယူရတာလည်းရှိပါတယ်..။
မစံပယ်သတိထားမိလာတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကို စဉ်းစားကြည့်ချင်လို့ပါ..။သာမာန်ပဲခင်ဘူးလိုက်တာပေမယ့် မစံပယ်အတွက်တော့ ထူးဆန်းနေမိရတဲ့ ဂုဏ်ယူတတ်မှုကြောင့် ထည့်ရေးလိုက်တာပါ..။ အဲဒီယောကျာ်းကအလုပ်ထဲမှာသူများခိုင်းတာလုပ်၊ အိုဗာတိုင်ကြေးနဲ့ဘာနဲ့ဆိုရင် လခမဆိုးဘူးပြောရမယ့်အလုပ်မှာရပါတယ်..။ အလုပ်မရှိတဲ့အချိန်မှာ ဘီယာလေးတမြမြနဲ့ မူးမူးရူးရူးနေတတ်တဲ့သူမျိူးပါ..။ ပင်ပန်းလာလို့ ဘီယာနဲ့အပန်းဖြေတာပါတဲ့..။ အဲဒီလူအမြဲသုံးနေကျစကားက ငါမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးတဲ့....။ သူကအဲလိုစကားအမြဲထည့်ထည့်ပြောတော့ အဲဒီစကားထည့်ပြောရကောင်းမှန်းမသိတဲ့ မစံပယ်က ကိုယ်ဘာသာစဉ်းစားတယ်..။ ငါရောမဟုတ်တာလုပ်သလား လို့..။ မလုပ်ပါဘူး..။ ဒါပေမယ့် ဒါကို စကားလုပ်ပြောနေရမယ်လို့ မစဉ်းစားဘူးပါဘူး..။ အဲဒီစကားထည့်ထည့်မပြောတဲ့တစ်ခြားသူတွေကိုရော စဉ်းစားကြည့်တယ်..။ သူတို့ရောမဟုတ်တာလုပ်သလားလို့..။ သူတို့လည်းမဟုတ်တာမလုပ်ကြပါဘူး..။ ဒါပေမယ့် စကားထဲထည့်မပြောကြပါဘူး..။ အဲဒီတော့ မစံပယ်ကောက်ချက်ချကြည့်တယ်..။ ဒီလူဟာ သူအရက်သောက်ပြီး မူးတာရှိမယ်..။ မကောင်းတဲ့မိန်းမတွေဆီသွားတာရှိမယ်..။ ဒါပေမယ့် သူဘာသူဒါတွေအတွက်လည်း Guilt ဖြစ်နေတယ်..။ ဒါကြောင့်မို့ပဲ သူဘာသာသူ ငါမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးလို့ အမြဲအားတင်းထားနေတဲ့ သဘောရှိတယ်..။ သူဟာ မျက်မှန်နဲ့အသားမကျသေးတဲ့လူလိုမျိူးပဲလို့..။
ဒါဆို မစံပယ်ကိုယ်မစံပယ် အကဲခတ်ကြည့်ရအောင်..။ မစံပယ်မှာရော မျက်မှန်နဲ့အသားမကျသလို အကျင့်မျိူးမရှိဘူးလားဆိုတော့ ရှိနေပြန်ရော..။ ဘာလို့သတိထားမိလာတာလည်းဆိုတော့ ဆရာတော်ဦးဇောတိကရဲ့တရားတွေနာပြီး ကိုယ့်စိတ်ကတွေးနေတိုင်း ဘာတွေတွေးမိတတ်လဲဆိုတာ သတိထားမိအောင်ကြိုးစားကြည့်တဲ့အခါမှာ မစံပယ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြန်တွေ့လာရပါတယ်..။ မစံပယ်က ငါဟာယောကျာ်းတစ်ယောက်ကလက်တွဲမယ်ဆို လက်တွဲချင်စရာကောင်းတဲ့ အပြလှတဲ့သူမျိူးဆိုတာ မစံပယ်ကိုယ်တိုင်ရဲ့နှူတ်ကနေ ခင်မင်ရတဲ့ညီမနှစ်ယောက်ကို ပြောလိုက်မိဘူးပါတယ်..။ အဲဒီမှာ အဲဒီညီမတွေရဲ့မျက်နှာမှာ မစံပယ်ကိုတစ်မျိူးဖြစ်သွားတဲ့မျက်နှာတွေနဲ့ ကြည့်တာကို သတိထားမိလိုက်ပါတယ်..။ မစံပယ်ဘာလို့ဒီစကားပြောထွက်တာလဲ..။ မစံပယ်စိတ်ထဲ ဘာစိတ်အခံရှိနေလို့ ဒီလိုပြောထွက်တာလဲ..။ အဲဒီမှာ မစံပယ်ရဲ့အငုံ့စိတ်တစ်ချိူ့ကိုသွားတွေ့ပါတယ်..။(ဒီစိတ်ကို အကျယ်ချဲ့မပြောချင်ပါဘူး..။) အော်..ငါ ဒီစိတ်ကိုကာကွယ်ချင်လို့ ဒီလိုပြောထွက်သွားတာပါလားဆိုတာ နောက်မှသဘောပေါက်မိရပါတယ်..။
နောက်တစ်ခါကတော့ အစ်ကိုအရွယ်ယောကျာ်းတစ်ယောက်ကို မစံပယ်တို့အိမ်မှာ ကားရှိတယ်ဆိုတာ သိစေချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိူးသက်ရောက်သွားစေတဲ့ စကားပြောမိလိုက်တာပါပဲ..။ မစံပယ်က တော်တော်ကိုတုတ်ထိုးအိုးပေါက်ပြောမိတဲ့အခါ ပြောတတ်လွန်းပါတယ်..။ အရင်ကတော့ သတိထားရမယ်ဆိုတာ သိပေမယ့် သတိဆိုတာဘယ်လိုထားရမလဲဆိုတာ မသိခဲ့ဘူး..။ အခုတော့ ဦးဇောတိကတရား တော်တော်နာထားတာနဲ့ သိနေအောင်ကြိုးစားဖြစ်တာနဲ့ စကားပြောလည်း အမှတ်မဲ့မပြောဖြစ်တော့ဘူး..။ သိနေပြီးပြောဖြစ်လာတော့ ဘယ်လိုစိတ်အထာနဲ့ပြောနေလဲ..၊ ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြောနေလဲဆိုတာ အမြဲသတိထားမိဖြစ်လာတော့ အမှားနည်းလာတာတစ်ခု ကောင်းကျိူးတွေ့ရတယ်..။
နောက်တစ်ခါ ခင်တဲ့အစ်မအရွယ်တစ်ယောက်ကို မစံပယ်အမေသည် မစံပယ်ကို လိုသလောက်ထောက်ပံ့နိုင်သောသူဖြစ်ကြောင်း ပြောမိလိုက်တာရယ်..။ ဘယ်လိုစိတ်အထာနဲ့ပြောမိလိုက်တာလဲ..။ (မစံပယ်စိတ်ထဲက အငုံ့စိတ်ကိုကာကွယ်ချင်စိတ်နဲ့ပြောလိုက်မိတယ်မှန်း အခုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သဘောပေါက်လာပါတယ်..။)မစံပယ်မကြာခဏအဲလိုပြောပြောထွက်နေခြင်းဟာ မျက်မှန်နဲ့အသားမကျသေးတဲ့စိတ်အထာတွေနဲ့ ပြောမိလိုက်ကြောင်း ပြန်အမှတ်ရမိတယ်..။
နောက်ထပ်ဥပမာကျန်ပါသေးတယ်..။ မစံပယ်တို့စလုံးမှာကျောင်းတက်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟာ အချိန်ပိုင်းအလုပ် လုပ်ကြတဲ့သူများပါတယ်..။ အဲဒီအခါ ဘာမှသိပ်ဦးနှောက်သုံးစရာမလိုတဲ့အလုပ်တွေမှာ လုပ်ကြရတာ များပါတယ်..။ မစံပယ်လည်း အချိန်ပိုင်းအလုပ်ကို ငွေသိမ်းတဲ့အလုပ်မှာ လုပ်ပါတယ်..။ ဒီအခါမှာ မစံပယ်ကိုသင်ပြပေးတဲ့သူဟာ မြန်မာပြည်ပေါက် တရုတ်မတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်..။ အဲဒီမှာ အဲဒီတရုတ်မအစ်မကြီးဟာ မစံပယ်ကို ခဏခဏသူနဲ့လာလုပ်ပေးဖို့ ခေါ်လေ့ရှိပါတယ်..။ မစံပယ်ကလည်း ကိုယ့်ကိုလုပ်တတ်ကိုင်တတ်အောင်သင်ပြပေးတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ်တတ်နိုင်ရင် သွားလုပ်ပေးပါတယ်..။ သူနဲ့အနေများလာတဲ့အခါ သူ့ရဲ့မျက်မှန်အကျင့်ကို သတိထားမိလာရပြန်ပါတယ်..။ ငါတို့က ကိုယ်ချင်စာစိတ်နဲ့အလုပ်လုပ်တာတဲ့..။ အဲဒီစကား ခဏခဏပြောတတ်ပါတယ်..။ မစံပယ်သတိထားမိလာသလောက် သူနဲ့အလုပ်တွဲလုပ်ကြတဲ့သူတော်တော်များများဟာ မတတ်သာလို့သာလုပ်ကြရတယ်..။ ဘယ်သူမှသူနဲ့မလုပ်နိုင်ကြ..၊ မလုပ်ချင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်..။ သူက သူဖြစ်စေချင်သလိုဖြစ်နေမှ ကျေနပ်တဲ့သူမျိူးဖြစ်ပါတယ်..။ သူဖြစ်သလိုဖြစ်မနေရင် မြည်တွန်တောက်တီး..၊ ဒေါသထွက်..၊ စကားများဖို့လည်း ၀န်မလေးပါဘူး..။ သူနဲ့အဆင်မပြေသူတိုင်းကိုလည်း အလုပ်ကနေထုတ်ထုတ်ပစ်ပါတယ်..။ ပြောတာကတော့ ငါမတရားတာ မလုပ်ဘူးလို့ ပြောလေ့ရှိပါတယ်..။ သူပြောချင်တဲ့အခါ မစံပယ်အပါအ၀င် ကျန်တဲ့သူတွေအားလုံးကို နှစ်ပြားမှမတန် ရစရာမရှိအောင် ပြောလေ့ရှိပါတယ်..။ သူသည်သာ တာဝန်အကျေဆုံးလို့လည်း ဂုဏ်ယူတတ်ပါတယ်..။ အလုပ်လည်းတကယ်လုပ်ပါတယ်..။ ကျောင်းသူကျောင်းသားအပါအ၀င် ငွေရေးကြေးရေးအခက်အခဲကြောင့် အချိန်ပိုင်းအလုပ်ထပ်လုပ်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာအစ်ကိုတစ်ယောက်ကိုလည်း သူလောက်မှမတတ်ဘူးလို့ ရေရွတ်တတ်ပါတယ်..။ မစံပယ်ကတော့ မစံပယ်တို့သည် ကျောင်းသာအဓိကထားရသော ကျောင်းသားများဖြစ်ကြောင်းနှင့် အလုပ်နှင့်ကျောင်း နှစ်ခုမျှထားသလိုဖြစ်နေသည့်အတွက် သူ့လောက်အားစိုက်မလုပ်မိဘူးဆိုတာ ၀န်ခံပါတယ်လို့ပဲ အေးအေးဆေးဆေးပြောလိုက်ပါတယ်..။ အဲဒီအလုပ်သည် သူမအတွက် ပင်မသွေးကြောအလုပ်ဖြစ်တယ်..။ မစံပယ်တို့အတွက် ပင်မအလုပ်မဟုတ်တဲ့အတွက် အလေးထားတာကွာနေတာဖြစ်ကြောင်း ပြောလိုက်ပါတယ်..။ အင်ဂျင်နီယာနဲ့ကျောင်းပြီး ရာထူးတွေဘာတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့အစ်ကိုတစ်ယောက်က ဒီမှာ အင်ဂျင်နီယာအလုပ်ရှာမရလို့ ရရာဝင်လုပ်လိုက်တဲ့အခါ အဲဒီအစ်မရဲ့ အရင်အလုပ်ဖြစ်တဲ့ သန့်ရှင်းရေးမှာ အလုပ်သမားအဖြစ်ဝင်လုပ်တဲ့အခါ အဲဒီအစ်မရဲ့စိတ်ထဲမှာ အင်ဂျင်နီယာတွေသည် သူ့လောက်မစွံဘူးလို့ မြင်လာပါတော့တယ်..။
မစံပယ်စဉ်းစားမိတာတွေကို ကောက်ချက်ချမိတာကတော့ လူတစ်ယောက်ယောက်က တစ်ခုခုကိုသူ့ကိုယ်သူဂုဏ်တင်ပြောနေပြီဆိုရင်တော့ အဲဒီဂုဏ်တင်တဲ့အချက်ဟာ သူ့အားနည်းချက်ဆိုတာပဲ..။ မဟုတ်တာမလုပ်ဘူးဆိုတာ မဟုတ်တာများများလုပ်တတ်တဲ့သူ ပြောလေ့ရှိတဲ့စကားပဲ..။
ငါတို့က ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့အလုပ်လုပ်တာလို့ ထုတ်ဖော်ပြောပြီဆို သူကိုယ်ချင်းစာစိတ်နည်းတာ သေချာသလောက်ရှိပြီဆိုတာ သဘောပေါက်ပေတော့..။ သူ့ကိုယ်ချင်းစာစိတ်က ရှိတော့ရှိမယ်..။ ရှိရင်လည်းရေတွက်လို့ရလောက်အောင် နည်းနေလိမ့်မယ်..။ ကိုယ်ချင်းမစာမနာလုပ်လိုက်မိတာတွေ ပိုများလိမ့်မယ်...။
နောက်ထပ်ရေးစရာ ဥပမာတစ်ချိူ့ကျန်သေးပေမယ့် မရေးတော့ဘဲ ရပ်လိုက်ပါပြီ..။ ရေးရင် မကောင်းတတ်လို့ပါ..။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 7/02/2012 03:28:00 am3comments
ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ အလုပ်သမားလိုအပ်နေကြောင်း အကြောင်းကြားစာ..။
Network အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်အလိုရှိနေကြောင်း မေးလ်တစ်စောင်ဒီကနေ့လက်ခံရရှိပါတယ်..။
Our company has an job opening for network engineer who knows how to maintain server 2003/2008.
အီးမေးလ်ကတော့ Email : steve@interaccion.asia ဖြစ်ပါတယ်..။ ကိုက်ညီသူများ လျှောက်ထားနိုင်ကြပါတယ်..။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 7/02/2012 01:39:00 am0comments
၀ါသနာအရင်းခံ..၊ အတွေ့အကြုံ၊ အတွေးအကြံ၊ စိတ်ကူးတို့ဖောက်ထုတ်ရာနေရာ..။
အားနာပါးနာ ၀င်ဖတ်ပေးကြတဲ့ ပို့စ်တွေ..။
မီးမီးဖုန်းနှင့် အရအမိရိုက်လာသော လူဆိုးကြီးများ..။
ဘယ်အစွန်မှ လူဆိုးကြီး လေးပွ..၊ အင်္ကျီအနက်နှင့် ကိုဖြိုး..။ ဒီညာဘက်စွန်က ဦးဒိပါဘူး..မီးမီးပြောတဲ့အထဲမှာ..။ ဟဲဟဲ..။ အဲဒီနေ့က ဦးဒိက ကျွေးတာမို...
မစံပယ်အခုကျောင်း ၃ လနီးပါးအားတယ်ပေါ့နော်..။ မစံပယ်အိမ်ပြန်ချင်တယ်..။ ဒီမှာအသုံးလိုတဲ့စာအုပ်လေးတွေပြန်ယူချင်တာရယ်..၊ မစံပယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဝတ...
မစံပယ်နှင့် ဖိနပ် ၉ ရံ....။
မစံပယ် စလုံးရောက်သည်မှာ တစ်နှစ်ကျော်၍၃လစွန်းစွန်း ၄ လထဲဝင်ရုံသာရှိသေးသည်..။ တွက်ကြည့်လိုက်တော့ ဖိနပ် ၉ ရံ ပြတ်ပြီးပြီး..။ မစံပယ်တို့ မြန်မာန...
ဂိုက်ပေးကြမ်းတဲ့ ကိုသောမတ်စ်..။ သောမတ်စ်ကိုအကြောင်းပြပြီး မီးကလည်း ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တာ..။ ကိုယ်ချည်းပဲခဏခဏရိုက်တင်နေရင် ဘယ်ကောင်းမလဲနော်..။ ...
http://www.multiupload.com/FMZP4FQGCU မောင် ၀တ္ထု..။ အကြိမ်ပေါင်းမရေတွက်နိုင်အောင်ဖတ်ခဲ့ပြီးတဲ့ ၀တ္ထုလေး...။ အဲဒါကြောင့် ၀မ်းနည်းတတ်၊ ခံစား...
ကျွန်တော်နှင့် NTU နေ့စွဲများ..။ (9)
မစံပယ်နှင့် အလွဲများ (3)
သတိပဌာန် Quatation များ..။ (1)
ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ အလုပ်သမားလိုအပ်နေကြောင်း အကြောင်းကြာ...
စံပယ်ပန်း. Theme images by neomistyle. Powered by Blogger.